Myanmar – Thiha Oo
Ubuntu Linux ဒါမှမဟုတ် သူ့ကို အခြေခံထားတဲ့ Linux Mint လိုမျိုး Linux OS တွေကို bootable USB ကနေ install လုပ်တဲ့အခါ insallation လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးကာနီးလို့ GRUB bootloader ကို ထည့်တဲ့အခါကျမှ fail ဖြစ်တာမျိုး ကြုံဖူးမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ရဲ့ Gigabyte BRIX-PRO computer လေးထဲကို Linux Mint 17/18 ကို install လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတုန်းကလည်း grub install fail ဖြစ်ပါတယ်။ Bootloader ထည့်လို့မရတဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာကို reboot ပြန်လုပ်ရင်လည်း boot error ပဲ ပြနေပြီး Linux ထဲကို သွားလို့ […]
Tuesday , 5, December 2017 admin Myanmar, Other topics..., Software Leaveacomment
Sweet Home 3D သုံးပြီး စိတ်ကူးနဲ့ အိမ်လေး ဆောက်၊ အခန်းလေးတွေ ဖွဲ့ကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့၊ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ Java-based application ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows, MacOS, Linux OS တွေမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Sweet Home 3D မှာ နံရံတွေရဲ့ အနိမ့်အမြင့်၊ အရွယ်အစား၊ နေရာ၊ တံခါး size, position ၊ အရောင်တွေ ကို အသေးစိတ် စိတ်ကြိုက် တန်ဆာဆင်ယူလို့ ရပါတယ်။ 2D planner view မှာစိတ်ကြိုက် နေရာချပြီးရင် 3D View နဲ့လည်း ကြည့်လို့ရတော့ ပျော်စရာ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ Arial 3D view, virtual visit view စသည်ဖြင့်လည်း […]
Tuesday , 5, December 2017 admin Linux related, Myanmar, Software, Technical/Programming (Eng) Leaveacomment
Linux ကို လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ အဆင်ပြေပြေ သုံးချင်တယ်၊ Linux ကို install လုပ်ပြီးရင် အသုံးများတဲ့ components တွေ အတွက် commandline terminal မှာပဲ ခေါင်းစား မနေချင်တဲ့ သူတွေနဲ့ ၊ အထူးသဖြင့် Linux ကို အရမ်းကြီး မသုံးဖူးပဲ အခုမှ သုံးကြည့်မယ့် သူတွေအတွက် ဆို၇င် ကျွန်တော့ အမြင်ကတော့ Linux Mint က အကောင်းဆုံး လို့ မြင်ပါတယ်။ Linux Mint က Ubuntu Linux အပေါ်မှာ အခြေပြုထားတဲ့ အတွက် Ubuntu မှာ လုပ်တာအားလုံး လိုလို လုပ်လို့ရပါတယ်။ Ubuntu မှာလိုပဲ Linux Mint […]
Hackintosh computer တစ်လုံး ဖန်တီးကြည့်ရအောင်…
Tuesday , 19, September 2017 admin "Apple" related posts, Hackintosh, Hardware, Myanmar, Software, Technical/Programming (Eng) Leaveacomment
Mac OS X ကို ကိုယ့်ဘာသာ personally စမ်းကြည့်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် iOS mobile application လေးတွေ develop လုပ်ကြည့်ချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Apple computer တစ်လုံး မ၀ယ်ပဲနဲ့ OS X ကိုသုံးဖို့ ကြိုးစားမယ် ဆိုရင်တော့ Hackintosh လို့ခေါ်ကြတဲ့ hacked Macintosh computer တစ်လုံး ဖန်တီးယူ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက Apple computer မဟုတ်တဲ့ PC ထဲကို Mac OS X ထည့်သွင်းတာက Apple ရဲ့ End user license agreement အရဆိုရင် တရားမ၀င်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိတော့ ကိုယ့်ဘာသာ […]
ဒီနေ့ခေတ် Ultrabook laptop လေးတွေ ၀ယ်တဲ့အခါမှာ များသောအားဖြင့် graphic processor အနေနဲ့ သီးသန့် dedicated graphic processing unit (GPU) တွေ မပါပဲနဲ့ Intel CPU ထဲမှာ build-in ထည့်သွင်းထားတတ်တဲ့ IGPU လို့ ခေါ်တဲ့ Integreated GPU တွေပဲ ပါတာမျာါးတယ်။ ဥပမာ- Intel HD graphics 4000, 5000, Intel HD 520 တို့လို မျိုးပေါ့။ အဲဒီလို Integrated GPU (I-GPU) တွေသုံးထားတဲ့ laptop, ultrabook လေးတွေကို သုံးမယ်ဆိုရင် graphic performance က CPU အပေါ်မှာလည်း အများကြီး […]
Manually install Android ADB driver
Friday , 31, March 2017 admin Android related..., Myanmar, Programming related..., Windows related... Leaveacomment
Windows7နဲ့ Unity သုံးပြီး ကျွန်တော့ရဲ့ Galaxy J5 Android phone ပေါ်ကို Unity AR program ကို deploy လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ Android SDK နဲ့ driver တွေက ပညာပြတာကို ခံရတော့တာပါပဲ။ Device ပေါ်မှာ USB Debug Mode ကို ဖွင့်ထားပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် ADB က device ကို လုံးဝမတွေ့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ Samsung USB drivers တွေလည်း download လုပ်ပြီး install လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ မရပါ။ Android 4.4 ပါတဲ့ HTC Desire 610 […]
Friday , 19, August 2016 admin Myanmar, Programming related... Leaveacomment
ကျွန်တော်တို့တွေ Object-Oriented Design တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ object/component တွေ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ပါတ်သက်မှု ကို ဖေါ်ပြတဲ့ ပုံစံ ၃ မျိုးနဲ့ အမြဲတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ၃ မျိုးကတော့ Association, Aggregation နဲ့ Composition တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Association ဆိုတာကတော့ object A နဲ့ object B တို့ကြားမှာ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ဆက်သွယ်မှု ပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။ A က B ရဲ့ service တစ်ခုခုကို ယူပြီးသုံးခြင်း ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ(၁) PC သည် printerသို့မဟုတ် scanner ကို သုံးခြင်း။ ဥပမာ(၂) Program တစ်ခုရဲ့ UI […]
ရှေ့ဘီးယက် ကားဝယ်မလား၊ နောက်ဘီးယက် ကားဝယ်မလား…?
Tuesday , 1, December 2015 admin Myanmar, Other topics... Leaveacomment
Rear Wheel Drive (RWD) or Front Wheel Drive (FWD) or All Wheel Drive (AWD)? RWD လို့ခေါ်တဲ့ နောက်ဘီးကနေ မောင်းတဲ့ ကားတွေရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့… နောက်ဘီးကနေ ကားကို ရွေ့စေတဲ့အတွက် တည်ဆောက်ထားမှု ရိုးရှင်းပါတယ်။ တစ်ခုခု ပျက်ခဲ့ရင်လည်း ပြင်ဆင်မွန်းမံရတာ ရှေ့ဘီးဆွဲ ကားတွေလောက် မရှုပ်ထွေးတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပိုလည်း အကြမ်းခံတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ- လမ်းဘေး ပလက်ဖေါင်းပေါ်ကို မတော်တဆ ဘီးတက်သွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အောက်ခြေနဲ့ တိုက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဘီးယက် ကားတွေ မှာ ပျက်စီးနိုင်မှု ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ပြင်ဆင်မှု ကုန်ကျစားရိတ်က သိပ်မများတတ်ပါဘူး။ ဒီအားသာချက်ကြောင့် ရဲကားလို အကြမ်းပတမ်း အမြန်မောင်းရတဲ့ကားတွေ၊ service […]
Monday , 31, August 2015 admin Myanmar, Windows related... Leaveacomment
Windows FireFox browser ထဲမှာ Facebook chat သုံးတဲ့အခါ FB chat ထဲက voice message အသံမကြားရဘူး ဖြစ်နေရင်၊ ဒါမှမဟုတ် play button လေးကို နှိပ်လည်း ဘာအသံမှ ထွက်မလာဘူး ဆိုရင် Fifreox ရဲ့ ဒီ settings တွေကို ပြင်ပေးလုိ့ ရပါတယ်။ FireFox ရဲ့ address bar မှာ about:config လို့ ရိုက်ပြီး FireFox configuration settings ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ FireFox config ပွင့်လာရင် search box ထဲမှာ ပထမ တစ်ခု အနေနဲ့… media.directshow.enabled လို့ရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ပါ။ သူ့ရဲ့ […]